By SIHLE MLAMBO, ANDREW MELDRUM and FARAI MUTSAKA Sep 14, 2019
Harare - There were acres and acres of empty seats at the state funeral of former Zimbabwean president Robert Mugabe at the National Sports Stadium in Harare on Saturday.
Mugabe, who did last Friday, was afforded a state funeral of the highest order in Zimbabwe's history, which included parade marches from the Zimbabwean National Army, Aviation Force Zimbabwe, Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Prisons and Correctional Service.
President Emmerson Mnangagwa presided over the ceremony, attended by Mugabe's widow Grace, who wore a black veil.
Earlier this week, when Mugabe's body arrived from Singapore, where he died in a medical facility last Friday, thousands of Zimbabweans lined the streets of Harare to welcome him home.
Former Zimbabwean President Robert Mugabe's coffin arrives for a state funeral for at the National Sports Stadium in Harare. Picture: Themba Hadebe/AP
Yet on Saturday, the crowd only filled about 30% of the stadium's 60,000 capacity, with many of those in attendance wearing ZANU-PF party regalia.
The service and viewing of the body of Mugabe, who died last week in Singapore at age 95, comes following the announcement by the Mugabe family and that his burial will be postponed until a new resting place for his body can be constructed at the national Heroes' Acre monument.